Safarka Brunei Xalaal - Makhaayadaha - Masaajidyada - Hoteelada Saaxiibtinimada Muslimiinta
Xaaladda Covid-19 ee Brunei
Saldanada Brunei (Magaca oo buuxa: Negara Brunei Darussalam, oo leh "Darussalam" oo macnaheedu yahay "Hoyga Nabadda") waa wax yar laakiin - mahadnaq gaaska dabiiciga ah iyo khayraadka batroolka - waddan aad u hodan ku ah Koonfur-bari Aasiya. Way ku wareegsan tahay Malaysia wuxuuna leeyahay laba qaybood oo jidh ahaan loo kala saaray Malaysia, ku dhowaad inuu ahaado deegaan. Istaraatiijiyad ahaan loo taagay Koonfurta Shiinaha Badda, waxay ku dhowdahay marinnada badda ee muhiimka ah ee isku xira Badweynta Hindiya iyo Baasifigga, waa waddan masaajidyo xasilloon, kaymo saafi ah, iyo dad deggan oo saaxiibtinimo leh.
Bandar Seri Begawan - caasimada, mararka qaarna loo yaqaan "Bandar" ama "BSB" marka la soo gaabiyo
Bangar - waa magaalo laga galo dabeecadda aan la ogaan ee Temburong
Kuala Belait - magaalada labaad ee ugu weyn iyo magaalada xadka wadada Sarawak, Malaysia
Seria - xarun loogu talagalay warshadaha saliida, oo leh matxaf heersare ah iyo Taallada Bilyanka foosto
Tutong - waa magaalo yar, oo ku taal daafaha Webiga Tutong
Beerta Qaranka Ulu Temburong | alat = 4.478 | long = 115.2077 | image = Socodka dabeecadda.jpg}} - kan ugu horreeya iyo kan kaliya ee baarkinka qaran ee laga hirgeliyo Brunei, waxaa ku jira hawd aan la nadiifin waxaana loo yaqaanay "Dahabka Cagaaran ee Brunei"
Brunei waa saldanad mug leh oo saliid qanjir ah lehna dad gaaraya 450,000 laga soo bilaabo sanadkii 2016. Qaniimadan shidaalka laga soo saaray waxay abuurtay hanti aad u badan oo Suldaanka iyo qaar ka mid ah dadka deegaanka ah, waxaana cadeynta ugu wanaagsan ee arintan laga arkaa qasriga iyo masaajidada. . Si kastaba ha noqotee dad badan oo reer Brune ah, oo ay ku jiraan kuwa ku nool tuulada biyaha (Kampong Ayer), wali waxay leeyihiin nolol fudud, inkasta oo ay ku noolyihiin nolol raaxo leh.
Sharaxaada "saldanada saliida hodanka ku ah" waxay jah wareerin kartaa sawirada Dubai ama Qatar, laakiin socdaalayaasha rajooyinka noocaas ah waxay u badan tahay inay niyad jabaan. Brunei wax badan kama haysato xagga soojiidashada aadamiga u weyn, inkasta oo quusitaan aad u fiican iyo socod hawleed la heli karo, haddana ma laha jardiinooyin dabiici ah oo maskax-afuuf ku sameeya sida waddamada jaarka la ah Malaysia ee Sabah iyo Sarawak. Dad badan oo soo booqda Brunei runti waxay sidaa u sameeyaan oo keliya iyagoo u daneynaya "ururinta waddanka" ama "uruurinta shaabadda baasaboorka"
Haddii ay jiraan meelo soo jiidasho leh oo gaar u ah Brunei, waxay u badan tahay maqnaanshaha dad badan, jawiga raaxada leh laakiin jawiga deggan, iyo habka ay bulshadu weli ugu sii jirto diinta iyo muxaafidka, iyagoo diidaya inay qaataan casriga iyo caalamiyeynta inkasta oo ay leeyihiin hanti maadi ah oo sidaas lagu sameeyo.
Saldanadii Brunei waqtigiisii ​​ugu fiicnaa wuxuu dhacay inta udhaxeysa qarniyadii 15aad ilaa 17aad, markii ay xukunkeedu sii fiday dhulka xeebta ee waqooyi-galbeed Borneo iyo koonfurta Filibiin. Brunei ayaa markii dambe gashay xaalad hoos u dhac ah oo ay keeneen khilaaf gudaha ah oo ku saabsan dhaxal sugaha boqortooyada, isbalaarinta gumeystaha ee awoodaha reer Yurub, iyo burcad badeedka. 1888, Brunei wuxuu noqday maxmiyad Ingiriis. Waxaa loo soo bandhigay in lagu biiro Malaysia dowlad ahaan 1963dii, laakiin waxay uga baxday federaalka sababo la xiriira ismaandhaaf ku saabsan qadarka dakhligeeda shidaalka ee la siin lahaa dowladda dhexe ee Kuala Lumpur. Gobanimada waxaa la gaadhay 1984. Hal qoys ayaa xukumay Brunei in ka badan lix qarni.
1 Jan 1984 (oo ka yimid Boqortooyada Ingiriiska)
Maalinta Qaranka, 23 Feb (1984); note - 1 Jan 1984 waxay ahayd maalintii ay xornimada ka qaadatay Boqortooyada Midowday ee Ingiriiska, 23kii Febraayo 1984kii waxay ahayd maalintii xorriyadda laga qaatay ilaalinta Ingiriiska
29 Sebt 1959 (qodobada qaar waxaa lagu hakiyay xaalad deg deg ah tan iyo Dec 1962, qaarna ilaa xornimadii 1 Janaayo 1984)
Istana Nurul Iman waa qasriga ugu weyn adduunka ee la degto. Qasriga 300-acre ah wuxuu ku fadhiyaa nin laga sameeyay buur leh muuqaal cad oo Kampong Ayer ah. Istana Nurul Iman waa halka uu degan yahay Sultan Hassanal Bolkiah, waxaana la sheegaa in qasriga lagu qiimeeyo qiimahiisu yahay USD 600 million.
Lafdhabarta dhaqaalaha Brunei waa saliida iyo gaaska iyo Suldaanka Brunei wuxuu, caan ku yahay, inuu ka mid yahay dadka adduunka ugu taajirsan oo hantidiisa lagu qiyaaso ilaa 40 bilyan oo doollarka Mareykanka ah. GDP-ga qofkiiba wuu ka sarreeyaa inta badan dalalka kale ee soo koraya, iyo dakhli fara badan oo ka soo gala maalgashiga dibedda oo kaabaya wax soo saarka gudaha. Dawladdu waxay siisaa dhammaan muwaadiniinta dawlad daryeel oo dhammaystiran iyadoon laga qaadayn wax canshuur dakhli ah.
Dhamaan qeybaha dhaqaalaha si cadaalad ah ayaa loo xakameeyaa siyaasada dowlada waa isku dhaf isku dhafan oo kaabis ah, ilaalin iyo dhiiri galin ganacsi. Hogaamiyaasha Brunei waxay isku dayayaan inay isku dheelitiraan isdhexgalka joogtada ah ee wadanka ee dhaqaalaha aduunka iyo isku xirnaanshaha bulshada gudaha. Waxay noqotay ciyaartoy caan ka ah aduunka iyadoo gudoomiye ka noqotay 2005 APEC (Aasiyaanka Pacific ee Iskaashiga Dhaqaalaha). Qorshayaasha mustaqbalka waxaa ka mid ah kor u qaadista shaqaalaha, yareynta shaqo la’aanta, xoojinta bangiyada iyo waaxyaha dalxiiska, iyo, guud ahaan, ballaarinta saldhigga dhaqaale ee ka baxsan saliidda iyo gaaska.
Dhaqanka & Dhaqanka Brunei
Masjidka Jame 'Casr Hassanil Bolkiah ee ku yaal Bandar Seri Begawan
Marka la eego taariikhdooda la wadaago, Brunei waxay deris la wadaagaan dhaqanno badan Malaysia, iyadoo luuqada Malayga ay u adeegsanayso isku xirnaan labada dal ah.
Brunei rasmi ahaan waa Islaamka gobolka, oo leh masaajiddo waaweyn oo qurxoon oo waaweyn oo dalka oo dhan ah. Iibinta khamriga waa la mamnuucay. Keenida hilib (marka laga reebo cuntada badda) oo aan sharciyeysnayn "xalaal" (loo gowracay shareecada Islaamka) sidoo kale waa mamnuuc. Inta lagu jiro soonka bisha Ramadaan, dukaamo iyo makhaayado badan ayaa furnaan doona. Si kastaba ha noqotee, cunista, cabitaanka ama sigaar cabida dadka sooman hortooda waxaa loo arkaa edeb daro oo weydiisashada ogolaanshaha ayaa haboon. Filo in wax walba la xirayo - oo ay ku jiraan makhaayadaha hudheelka, iyo dukaamada oo dhan - inta lagu jiro Salaada Jimcaha (duhur-2PM) sanadka oo dhan. Waxyaabaha waxay bilaabmayaan inay xirmaan qiyaastii 11AM, oo waxay bilaabaan inay dib u furmaan markale 2PM. Xitaa basaska ayaa istaagaya socodkooda, in kastoo laga yaabo inaad wali qaadi karto taksi biyo ah.
Inta badan dadku waa Malay (67%) sidoo kale waxaa jira mid muhiim ah Chinese tiro yar oo kudhowaad 15% iyo waliba tiro dad asal ah, oo ay kujiraan Waxaa socday iyo hamlet qabiilooyinka dega hawdka kor u kaca iyo Temburong degmada (qaybta yar ee bariga oo ka go'day inteeda kale Brunei). Waxaa jira tiro badan oo ah shaqaale ajnabi ah kuwaas oo ka shaqeeya soo saarista saliida iyo gaaska ama jagooyinka hoose sida shaqaalaha maqaayadaha, shaqaalaha goobta ka shaqeeya iyo shaqaalaha gudaha. Saamiga labka iyo dhadig waa 3: 2. In ka badan rubuc ka mid ah dadku waa shaqaale soogalooti muddo gaaban ah, badankoodna waa rag.
Juqraafiga iyo cimilada
Cimilada Brunei waa kuleyl-hoosaadyo. Heerkulku wuxuu u dhexeeyaa 14-33 ° C, Janawari oo ah bisha ugu kulul. Xilli roobaadka marwalba waa mid dhexdhexaad ah oo qoyan, waxaa ku xiga xilli qalalan oo kulul iyo qoyan. Farqiga u dhexeeya labada xilli ma ahan mid calaamadeysan, hase yeeshe. Meelaha kaymaha iyo hawdka waxay u muuqdaan kuwo ka qabow kana qoyan gobolka xeebta.
Cilmiga guud ee Brunei waa dhul xeebeed fidsan oo u kaca buuraha bariga, meesha ugu sareysa ayaa ah Bukit Pagan at 1,850 mitir, oo leh buuro dhaadheer oo buuro leh galbeedka.
Ma jiraan duufaanno, dhulgariirro, daadad daran iyo noocyo kale oo masiibooyin dabiici ah oo lagula dagaallamo, arrimaha ugu waaweyn ee deegaankuna waa xilliyeed carceero ka dhasha dabka kaynta (taasi waxaa sababa dhul sifo sharci darro ah) oo ka ag dhow Indonesia.
Entry waa la diidi doonaa muwaadiniinta reer binu Israa'iil. Kuwa wata baasabooro kale oo ay ku jiraan shaambado iyo / ama fiisooyin laga helo Israel doono loo oggol yahay inuu soo galo.
Khariidad muujineysa shuruudaha fiisaha ee Brunei, oo leh dalal buluug, casaan iyo dahab leh oo fiiso la'aan lagu heli karo; iyo wadamada midabka cagaaran iyo guduudka ah leh fiisaha imaanshaha
Muwaadiniinta ajnabiga ah ee wadamada / dhulalka soo socda ayaa soo gali kara Brunei fiiso la’aan ilaa iyo inta ay soo bandhigayaan baasaboor shaqeynaya ugu yaraan 6 bilood:
Ilaa 90 maalmood: All Midowga Yurub dawladaha xubinta ka ah, muwaadiniinta Ingiriiska iyo maadooyinka xaq u leh joogitaanka Boqortooyada Ingiriiska, Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland, United States of America
Ilaa 30 maalmood: Malaysia, New Zealand, Cumaan, San Marino, Singapore, Kuuriyada Koofureed, Ukraine iyo Imaaraadka Carabta
Ilaa 14 maalmood: Kaamboodiya, Canada, Japan, Hong Kong SAR, Indonesia, Laos, Macau SAR, Maldives, Myanmar, Peru, Filibiin, Thailand iyo Vietnam
Muwaadiniinta Israa’iil looma oggola inay galaan Brunei, in kasta oo baasabooro kale oo ay ku jiraan shaambadaha iyo fiisooyinka Israa’iil dhibaato ku ahayn gelitaanka.
Muwaadiniinta Australia iyo Bahrain waxay heli karaan fiiso markay yimaadaan (hal ama dhowr galitaan) 30 maalmood. Muwaadiniinta Saudi Arabia iyo Kuwait waxay heli karaan hal gelitaan oo ah fiisada 30 maalmood markay yimaadaan. Muwaadiniinta Shiinaha, Qatar iyo Taiwan waxaad heli kartaa fiiso markaad timaado 14 maalmood. Muwaadiniintani waxay heli karaan fiiso markay yimaadaan $ 20 ama fiisada transit-ka ee 3 maalmood $ 5. Saraakiisha socdaalka ee Isgoyska Sungai Tujoh ee udhaxeysa Miri iyo Kuala Belait ma aqbali doonaan lacag bixinta fiisada imaatinka marka laga yimaado Brunei ama Singapore dollars - ATM ma jiro oo jeegag lama aqbalo. At garoonka diyaaradaha ee Brunei waa in sidoo kale lagu sameeyaa lacag caddaan ah. Waxaa jira sarrifle lacageed (oo leh qiime macquul ah), laakiin malaha ATM socdaalka ka hor. Haddii aad u baahan tahay fiiso imaatin ah, iska hubi inaad ku biirto safka saxda ah ee laga soo galo. Ku biirista safka baasaboorka ajnabiga ah waxay arki doontaa in laguu diro dhabarka qadka. Kooxo waaweyn oo dalxiis ah oo u baahan fiisooyin markay timaaddo ciriiri gelin kara nidaamka. Waxaa laga yaabaa inaad noqoto mid deg deg badan, adkaysi leh ama samir badan.
Caddaynta soo noqoshada ama safarka sii socda ayaa si rasmi ah looga baahan yahay si loo hubiyo duullimaadka aad ku tageyso Brunei. Haddii aad qorsheyneyso inaad ku baxdo markab waxaad u baahan doontaa inaad ka iibsato duulimaad jaban oo ka baxa Brunei kahor intaadan halkaa imaan. Haddii kale, waxaad ballansan kartaa duulimaad qaali ah (laakiin si buuxda loo soo celin karo), oo aad kansasho ka dib.
From Kuala Lumpur, Air Asia waa ma dhaqan gelinta sharcigan; markaa uma baahnid inaad u baahan tahay caddeyntaas soo noqoshada ah haddii aad ka soo duusho KL.
Kuwa u baahan fiiso waa inay horay uga sii dalbadaan safaarada Brunei, halkaas oo howsha ay ku qaadan karto ilaa 3 maalmood oo ay ku kacayso $ 20 fiiso hal mar ah. Ka eeg Waaxda Socdaalka Brunei wixii faahfaahin ah ee ugu dambeeyay.
Haddii aad u baahan tahay fiiso aad ku gasho Brunei, waxaad awoodi kartaa inaad mid ka codsato safaaradda Ingiriiska, guddiga sare, ama qunsuliyadda waddanka aad sharci ahaan ku deggan tahay haddii uusan jirin howlgalka shisheeyaha ee Brunei. Tusaale ahaan, safaaradaha Ingiriiska ee Addis Ababa iyo Belgrade waxay aqbalaan codsiyada fiisaha ee Bruneian (liiskan ayaa ah ma dhammaystiran). Meelaha diblumaasiyadeed ee Ingiriisku waxay ka qaadaan £ 50 si ay uga baaraandegaan dalabka fiisaha ee Bruneian iyo £ 70 dheeraad ah haddii maamulka ka socda Brunei ay u baahan yihiin in loo gudbiyo dalabka fiisaha. Masuuliyiinta Brunei sidoo kale waxay go'aansan karaan inay lacag dheeraad ah kaa qaadaan haddii ay si toos ah adiga kula soo xiriiraan.
Duuli si Brunei
Diyaaradda Royal Brunei Airlines ee BWN
Madaarka Caalamiga ah ee Brunei. Tani waa garoonka kaliya ee garoonka diyaaradaha ee Brunei oo ah xudunta shirkadda xamuulka qaada Royal Brunei Airlines (RBA) Gegada diyaaraduhu waa mid kooban, nadiif ah oo shaqeynaya.
Waxaa ku yaal maqaaxiyo ku yaal hareeraha iyo hareeraha dhulka, kastamka iyo socdaalkuna waa hagaagsan yihiin. Waxaa jira makhaayado cunto dheeri ah oo dheeri ah oo ka baxsan dadka imanaya. Waxaa jira ATM-yada dhinaceeda markay baxayaan, laakiin ma jiro hawo ama soo degitaan midna.
RBA waxay bixisaa shabakad macquul ah oo dhameystiran, iyadoo duulimaadyo maalinle ah ay ku timaado London, Dubai, Kuala Lumpur, Singapore iyo Kota Kinabalu, iyo afar jeer duulimaadyo aan joogsi laheyn todobaadle ah oo taga Kuching. Qiimaha ku raacaya wadada loo maro Brunei waa qiimo jaban oo waxaa laguu balan qaadayaa adeeg dhoola cadeynaya. Singapore Airlines waxay duulimaad ka sameysaa 5 jeer usbuucii Singapore, Malaysia Airlines waxay ka duushaa Kuala Lumpur laba jeer usbuucii. Shirkada duulimaadyada ee Malaysia Airlines ee 'MASwings' waxay duulimaadyo aadaa kana imaataa Kuching iyada oo loo sii maro Gunung Mulu National Park, 4 jeer asbuucii. Diyaaradda Miisaaniyadda ee AirAsia waxay duulimaadyo ku tagtaa Kuala Lumpur ugu yaraan $ 35 doolar oo keliya. Meelaha kale ee laga tago garoomada diyaaradaha ee ugu wanaagsan waa Singapore Changi iyo Kuala Lumpur.
Gelitaanka / fogaanshaha: Tagsi tagta Bandar Seri Begawan ee badhtamaha magaalada waxay qaadataa 20 daqiiqo waxayna ku kacaysaa qiyaastii $ 25. Socod daboolan oo hoos ugu dhaadhaca meesha baabuurka la dhigto oo ka durugsan Terminalka (ka leexo dhinaca midigta) waxay kuu horseedaysaa joogsiga baska ee basaska Purple ee Xarunta Magaalada ($ 1) oo shaqeeya maalintii oo keliya.
Ugu safro Brunei gaari
Waad gaari ku tagi kartaa Brunei oo ka socota Sarawak, Malaysia. Waxaa jira laba meelood oo laga soo galo qaybta ugu muhiimsan ee Brunei, midna Miri at Sungai Tujuh iyo mid ka socda Limbang at Kuala Lurah (Tedungan dhanka Malaysia). Labada is-goosad waxay leeyihiin bar-koontarool socdaal oo xadka ah laakiin safafku aad ayey u xumaan karaan, gaar ahaan maalmaha fasaxa ah.
Sidoo kale waa suurtogal in laga safro magaalooyinka Sarawak ee Limbang iyo Lawas ilaa degmada Bangar ee Brunei. Buundo ka gudubta wabiga Pandaruan ayaa la furay bishii Diseembar 2013 adeegga doomaha waa la joojiyay. Socdaalka hadda waxaa lagu sameeyaa Pandaruan (Malaysia dhinac; wuxuu furmay Juun 2007) iyo Puni (dhanka Brunei; wuxuu furmay 2013). Laga soo bilaabo Lawas (oo ku xiran wadada ilaa Kota Kinabalu ee Sabah, Malaysia), buundo kale ayaa dhameystireysa isku xirka u dhexeeya bangiyada wabiga Trusan (mana jiri doono fuulid doonta mar dambe). Qawaaniinta socdaalka ee Malaysiya waxaa lagu sameeyaa Trusan (xafiiska socdaalka, oo si rasmi ah loogu yaqaan isbaarada socdaalka ee Mengkalap, wuxuu ku yaal dukaan ku yaal bariga bariga marinka doonta) qiyaastii 8 km, mana sii joogo Lawas. Kuwa loogu talagalay Brunei waxaa lagu sameyn karaa kantaroolka Labu ee xadka.
Waa suurtagal in laga safro Kota Kinabalu, Sabah ilaa Bandar Seri Begawan hal maalin. Eeg Kota Kinabalu ilaa Brunei dhul ahaan bogga wixii faahfaahin ah.
Digniin: Kaliya xarumaha shidaalka ee dalka ayaa loo oggol yahay inay shidaal ka iibiyaan baabuurta leh taarikada aan ahayn kuwa loo yaqaan 'Brunei' sababo la xiriira arrimo canshuur. Waxay noqon kartaa wax laga xumaado in la helo saldhigyadan sidaas darteedna loo hubiyo in gaarigaaga kor loo qaaday.
The Malaysia-Brunei doonta magaalada Maleysia ee Limbang iyo degmada Bruneian ee Temburong waa la joojiyay tan iyo bishii Diseembar 2013, sababo la xiriira dhameystirka buundada saaxiibtinimada bilaashka ah, ee isku xirta labada xuduud ee dhanka bari ee Limbang.
*Laga soo bilaabo Miri: PHLS Express waxay ka shaqeysaa adeeg u dhexeeya Miri iyo Bandar Seri Begawan laba jeer maalintii. Basku wuxuu kaloo joogsan doonaa magaalooyin kale oo ka tirsan Brunei sida Tutong iyo Kuala Belait hadaad weydiisato.
Laga soo bilaabo Limbang: Ma jiraan basas toos ah oo u dhexeeya Bandar Seri Begawan iyo Limbang oo ku yaal Sarawak. Si kastaba ha noqotee, waad ka raaci kartaa baska maxalliga ah saldhigga basaska ee Bandar illaa Kuala Lurah ee xadka, ka gudub koontaroolka dhinaca Tedungan ee Sarawak oo raac baska Syarikat Bas Limbang ee ku socda Limbang. Samee gadaal haddii aad ka imaaneyso Limbang kuna socda Bandar. Basasku waxay ka baxaan boosteejada baska Limbang dhowr jeer maalintii waxayna qaadaan meesha loo socdo "Batu Danau". Tagaasida sidoo kale waxaa laga heli karaa labada dhinac ee xadka laakiin gorgortan adag ayaa ugu jira qiimaha. Waxaad sidoo kale ku tagi kartaa degmada Bangar adoo ka raacaya Limbang, in kastoo markale, aysan jirin basas toos ah oo tagaya Bangar; basaska oo dhan (halka loo socdo “Pandaruan”) waxay istaagaan markabka ka soo degaya Pandaruan, halkaasoo hadda ay ku taal bar kontorool ee socdaalka Malaysia. Ka gudub wabiga markab isla markaana raac taksi 5-ta km u socda Bangar.
Laga soo bilaabo Kota Kinabalu: basaska maalintii hal mar mara inta u dhexeysa BSB iyo Kota Kinabalu, Malaysia.
Safar doon ugu raaca Brunei
Xarunta ugu weyn ee doonta laga raaco ee ku taal Brunei waa tan Serasa Fermin Terminal Muara, oo 25 km u jirta Bandar Seri Begawan. Doomaha oo lagu beddelo Labuan, xitaa waad ka dhigi kartaa / ka imaan kartaa Kota Kinabalu, Sabah, maalin gudaheed. Ka eeg Kota Kinabalu illaa Brunei bogga bogga. Ka eeg Bandar Seri Begawan # Doon wixii faahfaahin ah ee ku saabsan terminalka.
Waxaa jira adeegga doonida laga raaco Brunei ilaa Sabah.
Ka taxaddar marka aad weydiineyso dadka deegaanka macluumaadka gaadiidka. Dadka halkan joogaa waa kuwo saaxiibtinimo leh oo waxtar badan leh, laakiin markaad weydiiso gaadiidka, waxaad ka heli doontaa saddex jawaabood oo kala duwan saddex qof oo kala duwan, xitaa dadka shaqadoodu tahay inay caawiyaan dalxiisayaasha.
Waxaa jira hal “wado weyn”, oo ka timaadda Bandar Seri Begawan (caasimadda) xeebta. Waa ku dhowaad dhammaan waddooyinka laba-marista ee Muara illaa Kuala Belait iyo buundada lacag-bixinta illaa Malaysia/ Sarawak galbeedka)
Waxa kale oo jira waddo dhinac ah oo tan ka baxsan, taas oo ku dhacda hawdka dhinaca dejinta Labi iyo wixii ka sii dambeeya. Muuqaal aad ufiican, iyo 4-giraangiraha ayaa laga yaabaa inay waxtar leeyihiin, laakiin wadada ayaa hada laxiray ilaa guryaha dhaadheer ee masaafo ka fog Labi. Ku kaydi biyaha dukaanka ku habboon isgoyska.
Ma jiraan taksi badan oo ku yaal Brunei, maxaa yeelay lahaanshaha baabuurta iyo isticmaalkiisu way sarreeyaan. Had iyo jeer qaar baa ku sugan garoonka diyaaradaha iyo qaar ku yaal Degmada Belait, laakiin fursad yar ayaa loo heli karaa tagsi bilaash ah oo wadada hareeraheeda, gaar ahaan subaxdii iyo galabtii saacadaha ugu sarreeya ee ay kireystaan ​​ganacsato. Ubaahan taksi waxay ubaahantahay wicitaan. Meesha ugu weyn ee tagaasida laga raaco ayaa toos uga toosan woqooyiga boosteejada basaska laga raaco ee caasimada iyadoo in yar oo tagaasida ah ay sugayaan
Tagaasida midkoodna ma haysto mitir taksi maadaama aysan jirin shirkad taksi ama sharci u baahan inuu mid yeesho. Darawalladu waxay leeyihiin qiimo go'an inta badan safarada, in kasta oo canshuuraha ay ku kala duwanaan karaan darawalada kala duwan, ama waxay ku siin doonaan qiimo safar aan caadi ahayn.
App-ka doorashada-raacista-doorashada ayaa ah DART.
Beddelka kale ayaa ah kireynta basaska dalxiiska si ay kuugu kaxeyso agagaarka Brunei, tusaale ahaan, maalin dhan, ama dhowr saacadood. Isku day inaad wax ka weydiso miisaska doonta saaran Muara. Kala hadal qiimaha marka hore ka hor intaadan oggolaan inaad fuusho gaariga.
209 km; lagu raadin karo farshaxan sawir ka yar 1.2 m. Tagaasida biyaha ayaa laga heli karaa caasimada.
Hareeraha caasimada, Bandar Seri Begawan, waxaa jira shabakad cabirkoodu wanaagsan yahay oo ah basas yar yar. Heerka sare ee lahaanshaha baabuurta gaarka loo leeyahay ee Brunei waxay la macno tahay in aad u yar oo reer Brune ah ay raacaan basaskan, kuwaas oo inta badan u adeega shaqaalaha ajaanibta ah. Xawaaraha basaska ayaa ku eg 50 km / saacaddii laakiin waa kuwo wax ku ool ah oo lagu kalsoonaan karo.
Guud ahaan, nidaamka basaska ee ku xeeran caasimada wuxuu ka soo baxaa boosteejada basaska ee degmada bartamaha. Waxaa jira joogsi bas oo loo qoondeeyay waddo kasta laakiin rakaabka waxaa laga qaadaa ama lagaa siiyaa goobo aan rasmi ahayn darawalkana sida uu doono. Qaabka aan rasmiga ahayn ee hawlgalku wuxuu sahlayaa safarka iyo sasabashada masruufka. Waxaa jira khariidado marinnada basaska loo maro boosteejada. Wadooyinka waa la lambariyaa basaskuna waa midabbo kala duwan oo ku xiran wadada. Kharashka waa $ 1 oo sida caadiga ah uu qaado kirishbooy laakiin sidoo kale waxaa laga yaabaa inuu soo qaado darawalka. Rakaabku wuxuu darawalka kula talin karaa meesha uu ka soo dego. Basasku waxay socdaan 20-40 daqiiqo oo kasta laga bilaabo 6 subaxnimo ilaa 6 galabnimo. Mararka qaar, kirishboygu wuxuu ka codsadaa rakaabka meelihii ay ka kala yimaadeen inay ka degaan oo ay ka boodaan qayb ka mid ah wadada, taas oo ka nixinaysa rakaabka doonaya inuu baska qabto. Basaska ayaa orda qiyaas ahaan 20-40 daqiiqo kasta laga bilaabo 6AM ilaa 6PM, laakiin ma jiro jadwal adag. Waa caadi in la sugo 30 ilaa 45 daqiiqo baska.
Waxaa sidoo kale jira bas aan dheereyn oo masaafada dheer ah oo mara inta udhaxeysa BSB iyo Seria ilaa Tutong.
Hitchhiking ayaa lagu sameyn karaa Brunei - darawallada ayaa aad u doonaya inay joojiyaan.
Afka rasmiga ah ee Brunei waa Malay (Bahasa Melayu), laakiin taariikhdeeda gumeystihii Ingiriiska darteed, English waxaa si ballaaran looga hadlaa loona fahmaa meelaha magaalooyinka ah, in kastoo mararka qaar lahjad adag leh. Malaay yar ayaa ka faa'iideysan doona meelaha miyiga ah, maadaama aqoonta Ingiriisiga ay ku xadidan tahay halkaas. In kasta oo dhammaan dadka reer Brunei ay awoodaan inay ku hadlaan afka Malayga, lahjadda maxalliga ah ee Malay ayaa ah mid aan la fahmi karin dadka kale ee ku hadla Malayga. Brunei waxay sidoo kale si rasmi ah u adeegsataa farta Carabiga ee loo yaqaan 'Malay' loona yaqaan Jawi. Bannaanka calaamadaha dowladda iyo daabacaadda diinta ku dhowaad dhammaan astaamaha waxay adeegsadaan xarfaha Roomaanka.
Bulshada Shiinaha ee ku nool Brunei waxay sii wadayaan inay ku hadlaan lahjadaha kala duwan ee Shiinaha, oo ay ku jiraan buugga weedha Minnan, Buugga weedhaha Teochew, iyo dhowr kale.
Goobaha dalxiisku waxay had iyo jeer leeyihiin calaamado ku qoran Ingiriisiga, iyo badiyaa Shiinaha iyo sidoo kale tirada badan ee dalxiisayaasha Shiinaha ah.
Daawashada daawashada ee Brunei
Beerta Qaranka Ulu Temburong ee Bangar
Masjidka Cumar Cali Saifuddien ee Bandar Seri Begawan
Bandar Seri Begawan wuxuu leeyahay dhowr madxaf oo loogu talagalay taariikhda Brunei iyo tan boqortooyada.
Maxaa laga qabanayaa Brunei
Muuqaalka Jerudong Park
Waxyaabaha lagu sameeyo gudaha iyo nawaaxiga Bandar Seri Begawan, eeg Bandar Seri Begawan.
Waxaa jira dalxiisyo badan oo bey'adeed oo caadi ahaan taga Temburong degmo doon ka dibna u socota "guri dheer" Ka dib waxaa raacaya doon quwad leh (dadka waddanka u dhashay) ilaa webiga ilaa kan Belalong National Park, keyd ku yaal kaymaha Borneo. Xarunta baarkinka waxaa ku yaalo lugo iyo cilmi baaris.
Jardiinka Park wuxuu mar ahaan jiray jardiino mawduuc hufan oo leh raacid fara badan. Nasiib darro, wareegga hoos u dhaca ee dayacaadda, hoos u dhaca gelitaanka iyo kharashyada dayactirka ee aan la awoodi karin ayaa horseeday xiritaanka iyo iibinta inta badan tikidhada waaweyn, oo ay ku jiraan saddexda roodle. Tani waxay beerta ku siisay jawi murugo leh "circus left city last week". Inta badan dadka soo booqda waxay aadaan oo keliya habeenkii si looga fogaado kuleylka inta lagu jiro maalinta. Bannaanka beerta ka baxsan, laakiin aad ugu dhow, waxaa ku yaal dhisme yar oo makhaayado ah oo furan habeenki, in kastoo in yar oo ka mid ah meheradaha weli shaqeynaya. Wargeysyada maxalliga ah ayaa soo sheegay qorshayaal lagu dayactirayo jardiinada iyada oo la xulay xulasho cusub.
Brunei waxay bixisaa quus weyn. Marka lagu daro dhuxusha iyo kalluunka, Brunei waxay hoy u tahay dhowr doomaha shiraaca iyo noocyo badan oo ah nudibranch - mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee SE Asia ee sawir qaadista. Heerkulka biyaha guud ahaan waa qiyaastii 30 ° C aragtidiisuna badanaa waa qiyaastii 10-30 mitir, in kasta oo tani beddelmi karto inta lagu jiro xilliga monsoon. Maaddaama quusitaanka halkan aan si weyn loo horumarin, waxay ka dhigan tahay in goobaha, iyo gaar ahaan dhuxusha, ay yihiin kuwo aan la nadiifin oo ku jira xaalad aan fiicnayn.
Goobaha quusin ee caanka ah waxaa ka mid ah Burbur Mareykan ah, Minisweeper Fasal Admirable, USS Salute (AM-294) ayaa jiifa kala badh ciidda hoosteeda 30m ka dib markii ay ku dhufatay miinada Japan 8th June 1945, inta lagu gudajiray duullaanka ka hor Brunei Bay, oo ay ku dhinteen sagaal qof. Burburkii Australia, Sannadkii 1949-kii intii aan ku sii jeednay safarka Manila waxa ay ku dhacday miino meel u jirta Brunei oo ay degtay. Burburka wuxuu kujiraa 33m oo biyo ah waana qiyaastii 85m. Dolphin 88 Wreck Markab ganacsi oo laga leeyahay dalka Malaysia ayaa quusay cimilo xumo sanadkii 2013. Noocyo khibrad badan leh ayaa ku raaxeysan doona sahaminta gudaha burburka. Burburka Saliida, Riig shidaal oo la fasaxay. Waxaa jira 9 qaabdhismeed oo la baarayo, mid kasta oo u muuqda inuu hoy u yahay hal koox oo kalluun ah. Baiei Maru Wreck wuxuu ahaa markab shidaal oo laga leeyahay Japan oo ku degay bishii Oktoobar 1944 degaanka Brunei Bay ka dib markii uu ku dhacay miino ay leedahay Japan. Waxaa daahfuray shidaalka 'Brunei Shell Petrol' intii lagu gudajiray sahaminta, burburka wuxuu ku fadhiyaa qiyaastii 50m oo biyo ah waxaana dhowaan lagu arkay qoolley taas oo loo maleynayo inay tahay markii ugu horeysay bisha Juun 2008 ee kooxaha naadiga maxaliga ah Goobaha kale ee quusin waxaa ka mid ah Labuan Wreck, Bolkiah Wreck, Burburka UBD, Amai Wreck, Arun Wreck, Dhagax Dhagax la magacaabo wax yar.
Quusitaanka quusitaanku aad ayuu macquul u yahay, celcelis ahaan waa $ 35-45 halkii quusin iyadoo ku xiran hadba inta quusasho ee aad sameyso iyo inaad qalabkaaga keento. Waxaa jira ururo dhowr ah oo aad safaro la sameyn karto sida; Poni Divers, Ocean Quest, The Brunei Sub Aqua Dive Club oo ku taal Brunei-Muara & Panaga Divers oo xarunteedu tahay seria
Wax ka iibsiga Brunei
Lacagta maxaliga ahi waa Dollar Brunei, oo lagu muujiyey astaanta “$"Ama"B$”(Lambarka ISO: BND). Waad maqli kartaa Ringgit loo tixraaci jiray doollarka laakiin iska hubi in qofka hadlaya uusan ka hadlin Ringgit-ka Malaysia (MYR) oo lagu qiimeeyo wax ka yar kala bar dollarka Brunei. Dhammaan qiimayaasha ku yaal hagahan waxay ku jiraan doolarka Brunei haddii aan si kale loo sheegin mooyee.
Doolarka Brunei wuxuu kuxiran yahay kan Singapore doolarka oo ah qiimaha 1: 1. Sharci ahaan lacagaha waxaa loo isticmaali karaa si is dhaafsi ah, marka haddii aad ka soo galayso Singapore, Ma jirto sabab loo beddelo lacag maadaama lacagtaada caddaanka ah si fudud loo aqbali doono. (Sidoo kale, wixii haraaga ah ee Doolarka ah ee loo yaqaan 'Brunei dollars' waxaa loo isticmaali karaa par in SingaporeSi kastaba ha noqotee, dukaamo badan ayaa diida Singapore qoraalo ay ka muuqato ilmo yar yar oo microsiko ah ku jira, iyo ogeysiisyo ku saabsan saamayntan ayaa lagu dhejiyaa diiwaanka lacagta. Rangiska Malaysia (RM) sidoo kale waa la aqbali doonaa qanjaruufo, laakiin sicirka sarrifka waxaa laga yaabaa inuusan adiga ku jirin. Giraanta lama heli karo bangiyada Brunei laakiin waxaa laga heli karaa sarriflayaasha.
Doolarka Brunei waxaa loo qaybiyaa 100 senti. Waxaa jira waraaqo lacag ah oo ka bilaabma $ 1 illaa $ 10,000 (oo ku habboon haddii aad wax u iibsaneyso Rolls-Royces) iyo qadaadiic ah 1-50 sent. Dhammaan qoraallada yaryar iyo taxanaha 2004 ee qoraallada waaweyn waxaa loo daabacay qoraallo polymer midab dhalaalaya leh.
Marka loo eego heerarka Koonfur-Aasiya ee Brunei qiyaastii waa isku mid Singapore, oo macnaheedu yahay qiyaas ahaan laba jibbaar sida deriska Malaysia. Waad yareyn kartaa qarashaadka adiga oo ka cunaya maqaayadaha maxaliga ah iskana ilaaliya maqaayadaha qaaliga ah ee hoteelada ku yaal. Hoyga miisaaniyadeed, markii uu aad u xadidanaa, wuu balaadhay sanadihii ugu dambeeyay waxaadna hada heli kartaa sariir hufan oo habeynki kudhowaad $ 30.
Ma jiraan wax badan oo ka mid ah warshadaha farsamada gacanta ee Brunei. Waxaad arki doontaa sacab muggeed oo noocyo kala duwan oo xusuusyaal summad leh leh nooca Brunei - kuwaas oo dhammaantood la soo dhoofiyo. Dukaamada nooca xusuusta badanaa waxay u adeegsadaan iibinta xiisaha dibedda laga keeno, shumacyo iyo hadiyado guud.
Halkee wax looga cunaa Brunei
Dadka reer Brunei waxay jecel yihiin inay wax ka cunaan banaanka waxaana jira makhaayado badan oo aad u fiican oo ku yaal Brunei oo u adeega noocyo kala duwan oo noocyo kala duwan ah, iyadoo ay ugu mahadcelinayaan tirada badan ee shaqaalaha ajaanibta ah ee dalka jooga.
Waxa kale oo jira deegaanka nasi katok, isku-darka fudud ee bariiska iyo hilibka lo'da ama digaagga la shiilay, oo aad u basbaasnaan kara. Way ka jaban tahay marka loo eego cuntada kale ee aad iibsan kartid, tusaale ahaan cuntada deegaanka sida bariiska digaagga. Si kastaba ha noqotee, maahan ikhtiyaar caafimaad leh, oo leh khudaar yar iyo dufan aad u badan.
Doorasho kale ayaa ah ambuyat, Khibrad cunto karin oo u gaar ah Borneo. Waa istaarjiyad iyo gooy goojo laga sameeyey sago lagu dhex ridi karo suugo macaan.
Ahaanshaha waddan Muslim ah, ku dhowaad dhammaan cuntada lagu iibiyo Brunei waa xalaal ah, marka laga reebo inay yihiin meelihii cuntada lagu iibiyey ee loogu talagalay qowmiyadda Shiinaha.
Kueh melayu (sonkor, sabiib, iyo canjeelo macaan oo laga buuxiyey looska)
Halkee laga joogaa Brunei
Hoyga Brunei wuxuu ahaan jiray mid aad qaali u ah, laakiin guryo martida iyo hudheello macquul ah qaarkood ayaa hadda laga heli karaa halkan iyo halkaas.
Nabdoonow oo iska ilaali khiyaanooyinka ka jira Brunei
Brunei, sida Malaysia, Indonesia iyo Singapore, ayaa leh aad u adag sharciyada markay tahay daroogada. Ka ganacsiga daroogada ilaa heer cayiman waxay leedahay a xukun dil ah oo qasab ah. Dembiyada kale, sida dilka, afduubka iyo haysashada hub aan sharciyeysnayn sidoo kale waxaa lagu ciqaabayaa dil. Brunei ayaa adeegsata karaamayn (ragga kaliya) kufsiga, iyo sidoo kale dambiyada halista ah, oo ay kujiraan soo galida sharci darrada ah, siyaadinta fiisadaada mudo kabadan 90 maalmood, dhac, musuqmaasuq iyo wax isdabamarin. Canayntu dharbaaxo maleh curcurka. Faalig ka soo baxa bakooradda qafilan ee rattan ayaa ah xanuun badan oo aad u xanuun badan. Waxay qaadan kartaa toddobaadyo si ay u bogsadaan, iyo xitaa nabarro nolosha. Sharciyadan waxay khuseeyaan ajaanibta sidoo kale.
Inta lagu guda jiro bisha islaamka ee Ramadaan, iska ilaali cunista cuntada iyo cabitaanka bulshada dhexdeeda sida ganaax culus oo kumanaan ah ayaa laga qaadi doonaa haddii lagu qabto iyagoo sidaas samaynaya. Intaa waxaa sii dheer, makhaayadaha oo dhan, oo ay ku jiraan kuwa aan xalaasha ahayn, waxay joojinayaan adeegyada cunta-qaadashada maalintii. Waxaa ugufiican in laga fogaado booqashada Brunei inta lagu jiro Ramadhan.
Guntii iyo gunaanadkii waa: inaad ogaato sharciyadooda, oo aad adeecdid.
Marka laga hadlayo amniga shaqsiyeed, Brunei waa waddan aad u ammaan badan, isla markaana la siman Japan, inkasta oo ay tahay inaad isticmaasho caqliga saliimka ah macno malahan.
Ku wadista Brunei way fududahay. Darawalada badankood waxay adeecaan sharciyada taraafikada, jidadkuna si wanaagsan ayaa loo dayactiray. Fogaanta ma fiicna. Haddii aad ku dhex socoto agagaarka Brunei, si kastaba ha noqotee, iska ilaali sabir la'aanta iyo / ama darawallada halista ah. Darawalada qaarkood waxay si cad u tixgeliyaan naftooda inay ka sarreeyaan sharciga, oo la siiyo qaab-dhismeedka bulsheed ee Brunei, tani waxay u badan tahay inay dhab ahaan tahay kiiska. Ka taxaddar dheeraad ah saqda dhexe iyo subaxa hore maadaama darawalada qaarkood ay si sharci darro ah ugu tartamaan waddooyinka.
Khaniisnimada waa sharci-darrada ah gudaha Brunei, oo leh rigoore dhimashada dhagax lagu dilo.
Caafimaadkaaga ku joog Brunei
Cunitaanka dibedda guud ahaan waa ammaan sababta oo ah heerarka wanaagsan ee badbaadada cuntada. Laakiin cab biyaha kaliya haddii la kariyey, ama biyo dhalo ku jira. Ka ilaali qaniinyada kaneecada. Qandhada Dengue waa khatar dhab ah. Khatarta duumada ayaa yar.
Brunei ee isbitaallada guud ahaan waa ku filan yihiin inta badan habraacyada caadiga ah. Si kastaba ha noqotee, takhasus la'aan awgeed, waxaad u baahan kartaa in diyaarad laguu raaco Singapore haddii kiiskaagu u baahan yahay habsocod qalliin oo adag; hubi in caymiskaagu daboolayo tan haddii aad qorsheyneyso inaad joogto Brunei.
Suldaan Cumar Cali Saifuddien Masjidka habeenkii
Dowladda Brunei waxaa loo maamulaa sida Malay Islamic Monarchy (MIB), oo macnaheedu yahay in Suldaanka Brunei, marka laga reebo inuu ka mid yahay ragga adduunka ugu taajirsan, uu si wax ku ool ah u maamulo dalka. Waxaad filan kartaa in Suldaanku ka soo muuqdo bogga hore ee labada wargeys ee maalinlaha ah maalin kasta, oo uu fadhiisto tobanka daqiiqo ee ugu horreeya ee warsidaha qaaxada.
Waxaad ku arkaysaa hodantinimada dalka wax kasta oo Suldaan taabto, laakiin inbadan oo dalka intiisa kale ah ayaa seegaysa maalgashi iyo horumar aad loogu baahnaa. In kabadan kalabar dalka waa shaqaale qurbajoog ah ama degane rasmi ah, mana ahan wax adag in lagala hadlo wadahadal ku saabsan xaaladda siyaasadeed markay helaan kalsoonidaada. Brunei waa wadan jinsiyadaada, diintaada iyo dhaxalkaagu ay kujiraan nolol maalmeedkaaga. Hase yeeshe, waxaa ugu wanaagsan in si taxaddar leh loo wajaho mawduuca, gaar ahaan kuwa Bruneians. Brunei waxay leedahay sharciyada lese majesté kuwaas oo kugu abuuri kara dhibaato culus cayda Qoyska Boqortooyada.
Bruneianku guud ahaan waa dad edeb leh oo dulqaad badan. Soo-booqdayaasha aan muslimka ahayn guud ahaan laguma xadidin qaabka labbiska. Dumarku ma gashan karaan shaatiyo iyo funaanado gacmo gashan kara oo way isku milmi karaan. Dharka dabaasha ee Super-skimpy ayaa laga yaabaa inuu yahay talaabo aad u fog.
Sida waddammada oo dhan, waa fikrad wanaagsan inaad fikradahaaga u haysatid arrimahaaga (gudaha, gobolka, ama caalamiga) iyo dhacdooyinka adduunka, gaar ahaan kuwa la xiriira Islaamka ama dalalka Islaamka. Laakiin inta badan dadka reer Brunei ayaa aad ugu faraxsan inay la wadaagaan ka wada hadalka doorka diintooda iyo boqortooyadooda ay ku leeyihiin noloshooda haddii aad si xushmad leh u dhageysato.
Sida Bariga Malaysia, Inta badan waxaa lagaa filayaa inaad kabahaaga kala baxdo Brunei, meelaha sida hoteelada, matxafyada, iyo masaajidda. Xidho sharaabaadyo haddii aad rabto, kuna mahadnaq fursadda aad ku qaboojiso cagahaaga ka dib markaad ku dhex socoto kulaylka kulaylaha.
Isgaarsiinta ee Brunei
Lambarka caalamiga ah ee Brunei waa 673. Nambarada telefoonada ee Brunei waxay ka kooban yihiin 7 lambar oo aan lahayn lambarro maxalli ah, in kasta oo lambarka ugu horreeya ee lambarku tilmaamayo aagga sida 3 ee Degmada Belait iyo 2 ee Bandar Seri Begawan.
Lacag bixinta Hallo Kad, ayaa laga heli karaa TelBru xafiisyada taleefannada (oo ay ku jiraan midka garoonka diyaaradaha) iyo meelaha kale ee laga helo madaahibta $ 5-50 waxaa loo isticmaali karaa taleefan kasta oo dalka ka mid ah si loogu sameeyo wicitaanno maxalli ah iyo kuwa caalami ah. Kaararka taleefannada kale ayaa sidoo kale loo heli karaa in loogu isticmaalo taleefannada dadweynaha.
Adeegyada taleefanka gacanta waxaa bixiya laba wade ka shaqeeya shabakadda DST iyo Progresif Cellular. Caymiska ayaa lagu dhammaystiray dhammaan waddanka oo dhan. Caymiska aagagga beerta qaran ee Temburong ayaa noqon kara mid jajaban.
Bandar Seri Begawan Xalaasha Safarka
eHalal Safarka Mart > Safarka Brunei Xalaal